Proclaiming the Word - Ny fahafinaretana manao izay mahalifaly ny Tompo | Outlines of Messages
Ny fahafinaretana manao izay mahalifaly ny Tompo
Lioka 12, 32
I Lioka dia tsy nanana fahafinaretana niaraka sy niresaka tamin’ny Tompo tahaka an’I Matio, Petera, na I Jakoba. Izy dia dokotera, izay naheno ny Filazantsara sy nanapa-kevitra ny hankato an’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny antontan-taratasy mirakitra ny lovantsofina mikasika ny Zanak’Andriamanitra. Jentilisa izy ary nanoratra tantara tamin’ny fomba hahafahan’ny tsirairay izay tsy jiosy mahazo azy.
Fa nahoana I Jesosy no niteny hoe, “aza matahotra ry ondry vitsy?”
Ireo izay an’ny Fanjakany dia mahatoky Azy.
Faly Andriamanitra noho nyfinoantsika Heb 11, 6: Fa raha tsy amin’ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka Aminy,” Rom 8, 8: “…ary izay ao amin’ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon’Andriamanitra” Izay te-hahafaly an’Andriamanitra, dia manantena an’I Kristy sy fahatsaran’ny fahamasinany. Ireo izay te-hahafaly ny Tompo, dia mikatsaka ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha. Ireo izay te-hahafaly ny Tompo dia vonona ny hatoky Azy.
Ireo izay an’ny Fanjakany dia midera Azy.
Davida dia nanambara ao amin’ny Salamo 69, 30-31 “ Hankalaza an’Andriamanitra amin’ny fihirana aho. Ary hidera Azy amin’ny fisaorana.fa sitrak’I Jehovah izany mihoatra noho ny vantotr’omby lahy. Izay manan-tandroka sy mivaky kitro.”
Amin’ny teny hafa dia, ireo izay manao izay mahafaly ny Tompo dia vonona ny hidera Azy. Tonga ao aminn’y tranon’ny Ray miaraka amin’ny fiderana. Mihira fiderana amin’ny fony rehetra. Ny fahavononantsika hidera Azy amin’ny hira, manao an’Andriamanitra mihoatra noho ny fiainana dia tena mahafaly Azy noho ny fombafomba sy fahazarana fotsiny.
Jesosy dia nihira fiderana alohan’ny nihatrehany ny hazo fijaliana. Hoy ny Tenin’Andriamanitra “ary rehefa nihira fiderana izy ireo dia nandeha niakatra ny tendrombohitra Oliva. ( Matio 26, 30). Ny baiboly dia mitanisa mihoatra ny 25 ireo olon’Andriamanitra mihira fiderana ho an’ny Tompo.HO an’ireo izay te-hahafaly any Tompo, Mahazo fahafinaretana amin’ny fiderany Andriamanitra.
Ireo izay ao amin’ny fanjakany dia mitory Azy.
Raha te-hahazo sitraka amin’Andriamanitra isika dia mila mitory an’I Kristy. Tsy afaka mitory ny Filazantsara isika raha ohatra ka mahafaly sy mila sitraka amin’ny olona fotsiny. (I Kor 1, 21: Gal1, 10).
Ny faniriantsika dia tokony milaza tahaka ny an’I Kristy hoe:”…Izaho dia manao izay sitrany mandrakariva.” (Jaona 8, 29; Romana 15, 3). Tena fanomezana lehibe ny mahafantatra fa isika dia tena sarobidy eo anatrehan’ny Tompo, tena fahafinaretany ny mahatonga antsika ho olony ao amin’ny fanjakany.
Fany fanjakan’Andriamanitra dia tsy amin’ny teny, fa amin’ny hery ( 1 Kor 4, 20).
1. Ny herin’ny fikarakarany: Manome antsika ny sakafo sahaza isan’andro Andriamanitra (Matio 6, 11), rano velona (jaona 4, 14)., lafatra sy fitsaharana (Matio 11, 28).
2. Herin’ny fiarovany: Mandefa ny anjeliny Izy miaro antsika ( Salamo 91, 11-13).
3. Herin’ny Teny fikasany: manome antsika ny teniny Izy ( Salamo 107, 20).